Soo koobid（TL; DR）
Baro qaybaha dib-u-eegid fiican iyo sida loo soo dhejid guluubka ugu horeeya ee alaabta bilaashka ah，safarro ama adeegyo bedelka dib u eegistaada.
0.1 Bixinta FTC：Xiriirada xiriirka ah waxaa lagu istmaalaa maqaalkan。 WHSR Waxaa Laga Helaa Kharashka Gudbinta ee ka Mid ah shirkadaha ku qoran boggan. Mid ka mid ah raaxada ugu weyn ee ahaanshaha baloog博客wuxuu qoraa dib u eegista alaabada。 Farxadda Helitaanka baakadaha boostada，Farxadda ku saabsan helitaanka shey cusub oo caawinaya qoyskeyga，iyo farxadda helitaanka lacag ka timid raaxada gurigeyga ayaa horseeday shaqadeyda ku saabsan qoristaed-ka. Sidee ayaad u bilaabi kartaa吗？ Asaasigaani wuxuu ku tusi doonaa sida aad u bilaabi laheyd dib u eegis sheyga. Tilmaamaha hadiyadda fasaxa ee leh dib-u-eegista iyo xiriiriyeyaasha ku xiran Xulashada alaabooyinka dib u eegista
1.4 4. Warbixintaada Guud Iyo Xogta Macluumaadka
1.5 5. Sheeko奇拉肖啊oo loogu talagalay dhammaantoodba
1.6 6. Xayiraadda oo han han dhan iyo Xiriirin Fiican
2.1 1. Badeecadaha istiraatiijiga啊
2.2 2. Shirkadaha saamileyda啊
2.4 4. je吉丁佛像
3 Hoos-hormarin，Ka-sii-deyn iyo Is-Badbaadinta Naftaada
5 马克斯·西加（Maxaa Xiga）?
Bixinta FTC：Xiriirada xiriirka ah waxaa lagu istmaalaa maqaalkan。 WHSR Waxaa Laga Helaa Kharashka Gudbinta ee ka Mid ah shirkadaha ku qoran boggan.
Mid ka mid ah raaxada ugu weyn ee ahaanshaha baloog博客wuxuu qoraa dib u eegista alaabada。 Farxadda Helitaanka baakadaha boostada，Farxadda ku saabsan helitaanka shey cusub oo caawinaya qoyskeyga，iyo farxadda helitaanka lacag ka timid raaxada gurigeyga ayaa horseeday shaqadeyda ku saabsan qoristaed-ka.
Sidee ayaad u bilaabi kartaa吗？ Asaasigaani wuxuu ku tusi doonaa sida aad u bilaabi laheyd dib u eegis sheyga.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso waa dhagaystayaashaada。 Tani ma ahan mid keliya oo faa’iido kuu leh，mise dabcan ma kugula talin kartaa badeecadani in aad saaxiib la wadaagto dhageystayaashaada bartilmaameedsanaya？ Xaqiiqdii waad dib u eegi kartaa badeecad kasta oo soo socota，在alaabaadu的laakiin hubso ay ka gudubto dhamaan seddexda dhibcood：
Waxay yihiin蜡和rabto或isticmaali karto；
Miyay xiiseynayaan / u isticmaalaan akhristayaashaada ama dadka dhagaystayaasha ah ee aad rabto;伊予
Haddii Aysan Ahayn，Dieb u eegistaada waxay u muuqataa mid iskiis u shaqeynaya.
Bilow inaad ka fikirto naftaada inaad tahay蜡saameynaya：Waxaad Saameyn ku yeelan kartaa dabeecadaha dhagaystayaasha iyo caadooyinka iibsashada.
Markaad akhristayaashaada koraan si ay kuugu aammaanaan，waxaad dabiici ahaan dooni doontaa inaad kugula taliso Waxyaabo Waxtar Leh iyaga。 Haddii ay jiraan badeeco，adeegyo ama xitaa meelo aad horay ugu riyaaqdey oo ku habboon tiiyoo aad blogka diirada saareyso，标签oo qor gabal ku saabsan。 Markaad Sidaa Sameysid，Adiga Waa Saameyn-Waa Sida Ug Fudud EE.
Marka ugu horeysa，ma heli doontid lacag ama helitaanka alaab bilaash ah，laakiin waxaad si sahal ah dib ugu eegi kartaa aragtidaada.
Abuuri boosto博客ah oo oo kugula taliya alaabta iyo isku xirnaanta xiriiriyahaaga barnaamijyada sida Barnaamijka iskaashiga亚马逊，许宾塔·古迪加（Xubinta Guddiga）或La qaybso iibka。 Fikradaha waxaa ka mid ah hagaha hadiyadaha fasaxyada，cuntooyinka ay ku jiraan maaddooyinka xiriirka la leh，safarada socdaalka，qalabka daabacaadda bogga，martigelinta，blogska，ama "Waa Inay Lahaadaan" xaalladaha ku jira waxyaabaha sida tiknoolajiyada sare，muuqaalka xilliga ama dib u noqoshada alaabta dugsiga.
Tusaale ahaan waa tilmaame hadiyado ah oo aan u abuuray akhristayaasha aan ugu dambeeyay ee Noorway（arag sawir sax ah）。 Hagaha hibada ayaa aad u weyn sababta oo ah markaad koreyso，waxaad ka qaadi kartaa shirkadaha inay kaqaybqaataan hagahaaga.
Bog Internet啊oo ku saabsan waalidnimada guud ayaa yeelan doonta xulasho ballaaran oo alaab ah oo laga xusho。 Si kastaba ha noqotee，baloog ku saabsan“ la noolaanshaha cagaaran ee carruurta” ayaa yeelan doonta xulasho yar oo ah badeecado iyo adeegyo laxiriira-oo keliya alaabada carruurta u wanaagsan。 Boostis ku saabsan qalabkii ugu dambeeyay ee farsamada halkaas kuma jiri doonaan dhagaystayaashaas.
Waxyaabo羽衣甘蓝oo gaar啊oo aad u wanaagsan oo dib-u-eegis iyo kor u qaadaya waa adeegyo martigelinta webka。 Waa Maxay Sababta？ Sababtoo啊蜡 "吉利桑" oo leh baahi weyn-在线查看更多信息。 Waxaad u baahan tahay oo aad isticmaashaa mid。 Sidaas awgeed maaha Dib u eeg hoygaaga internetka?
Qalabka qoysaska ee la heli karo si kor loogu qaado ShareASale。 Aniga i arko，buug iibsasho buug oo shakhsi ah，ayaa bixinaya 10％ee xubin walba oo iibka ah。 Waxaa jira shirkado 152 ku saabsan oo ku taxan shabakada ShareASale（是diiwaangelinta）.
Noocyada SOMALIYAHA MARKU U SHAQEEYA Marka aad sheygooda ka dhigeyso mid wanaagsan，markaa sawirro badan qaado oo samee waxkasta oo aad kartid si aad u aragto sawirka u fiican.
Hadday tahay shey蜡lagu karsado，tus sheyga iyo saxanka ka dhashay ee和aad abuurtay。 Haddii aadan sawir fiican ka qaadan karin，weydiiso macmiilka sawir ka-ka fiican inaad haysato蜡u muuqda蜡aan fiicnayn haba yaraatee laakiin waa inaad barataa inaad u qaaddo sawirro macquul ah ah aaad aad siad.
Tusaale ahaan，haddii aad dib u eegtay adeegga nadiifinta，waxaad ku gar garaaci kartaa calaamada baabuurka，kooxda iyo qalabka，iyo kahor / kadib sawirrada meelaha ay nadiif yihiin.
Sawirka hoos ku qoran waa dib-u-egis loogu talagalay buugaagta "冰冻的." Ogeysiis in aan haysto sawirro badan oo macquul ah，sidaa darteed waxaan ku soo celin karaa wakhti ka dib，oo bedelaya guddida garabka iyo mawduuca mar kasta oo aan sameeyo.
Tusaale羽衣甘蓝-Haddii aad fiiriso Jerry’s Dib-u-eegida InMotion-Wuxuu isticmaalaa tiro qiimo leh oo ku daraya sawirada iyo jaantusyada si uu u buuxiyo qoritaanka.
Sawir ay soo raacisay macmiil（Zarbee）
Qor waxkasta oo aad jeceshahay oo ku saabsan badeecadan，laakiin fiiro gaar ah u leh waxa uu tayada u xoojinayo hadda.
Tusaale ahaan，hadii ay tahay alerjiyo xasaasiyad leh iyo xilliga gu’ga，waxadad ku qori kartaa waxyaabaha ku saabsan sida ay ujirta waqtigan sanadkaan adiga iyo dadka kale ee xasaasiyadda qabta.
Erey xasuusin leh：诺卡达阿卡德！ Ha ku shubin walxo； Fiiri waxyaabaha wanaagsan ee aad ku riyaaqday ee ku habboon ololaha calaamadda haddii y suurtogal tahay ama haddii kale suura gali karto xaqiiqooyinka。 Isku day sidii aad蜡u soo bandhigtey intii aad awoodi kartid oo aad xoojisid蜡kasta oo aad jeceshahay.
Xilligii jadwalka ee xilligaan ka yimid Zarbee-Waxaan isticmaalaa sawirkoodii tan iyo markii aanan weli helin sheyga.
Shir sanad gudihiis ah，sathaan kaga qeybgalay Q&哦，我们是weheliyaan koox magac ku yaal。 Qaadashada muhiimka ah waxaan ka bartay wakiil wakiil ah taasi waa waxba waa mid heer sare啊。 Haddii aad ku qorto 100％dib-u-eegis wanaagsan，qofna kuma rumaysan doono，luminaayo luminta.
Qor Wax Ku Saabsan Qulqulka，Laakiin Waa inaad u dulqaado.
Xasuuso，waxadad isku dayeysaa inaad dadka ku wado si aad u iibsato sheygan。锡卡斯塔巴·哈·诺科特（Si kastaba ha noqotee），哈迪德·阿拉卜图（tadii alaabtu）和塔海（tahay mid dud）啊·阿玛·西拉杜胡（aycilladuhu）和阿达·巴丹·伊希因（adhi dhab ahaantii ugu taliyaan） Waxaa laga yaabaa inay doonayaan inaad joojiso shaqada ka dib dib u eegista，waxay ku hagaajin karaan cilladda ama laga yaabo inayna ogaanin dhibaatada oo ay ku weydiiyaan inaad dib u dhigto boostada。 La hadalka iyaga waa had iyo jeer颌骨，iyo waxay siinaysaa aragti wanaagsan oo adiga kugu habboon.
Ha ka baqin inaad tilmaamto cilladaha sheyga / adeegga-xitaa haddii lacag laga siinayo shirkadda。 Waa tan shaashada laga qaado Dib u eegista Jerry’s SiteGround-xusuuso cilladaha uu ku tilmaamay dib u eegista.
4. Warbixintaada Guud Iyo Xogta Macluumaadka
Markaad Liis gareysid waxyaabaha wanaagsan iyo cilladaha，waxaad siin kartaa fikraddaada guud-inaad noqotaa mid hal abuur leh sida aad jeceshahay。 Samee nidaam qiyaas ah，wuxuu siinayaa suulka ugu sareeya，muuji ilmaha ilmo dhoola-蜡卡斯塔oo adiga kuu fiican.
Ugu Dambeyntii，sii faahfaahinta ku saabsan badeecada，gaar ahaan xarig halka laga helo.
U sheeg sheeko jilicsan si aad u muujisid astaan​​ta bartaada.
5. Sheeko奇拉肖啊oo loogu talagalay dhammaantoodba
Maanta，sheeko-sheegiddu waa habka ugu wanaagsan ee lagu qori karo nuqul wanaagsan。 Tani waa arrin羽衣甘蓝oo magac leh爱.
Hadday fiicantahay，waxay xitaa la wadaagi karaan dib u eegistaada dhagaystayaashooda-Waana muujinta aad u fiican bartaada。 Haddii aad ku bilowdo sheeko shaqsiyadeed oo qasab ah iyo sida sheygu蜡ugu taray noloshaada，waxaad sidoo羽衣甘蓝heli doontaa颚巴布塔赫khristaha oo wanaagsan。 Hadday Fiicantahay，Waxay Xitaa La Wadaagi karaan dib u eegistaada dhagaystayaashooda-Waana Muujinta aad u fiican bartaada.
Iyada oo ololaha dib u eegista lagu bixiyo，waxan u sameeyey qoraalladaydii-qoraalkaygu wuxuu igu dhiirrigeliyay niyadjab aan ka qabay muusigeyga badan ee gurigeyga!
6. Xayiraadda oo han han dhan iyo Xiriirin Fiican
Xeerarka FTC Waxay Kaa Rabaan inaad sheegto markaad博客ku jirto蜡kasta oo nooca lacag caddaan ah，biaash ama qiimo dhimis ah，rasiidh，shahaadooyin cd yahishida sta / Gelitaanka.
Tani ku sameyso sare ee boostadaada ama ka hor wixii xiriir啊。 Haddii aadan ka helin alaabta si bilaash ah laakiin aad isticmaalayso xiriiradaada xiriiriye ahaaneed，WAA INAAD u sheegtaa sidoo kale.
Isticmaal fayaqabka haboon si aad u soo bandhigto warbaahinta bulshada。 Waxaan isticmaalaa "＃广告" ee在lagu xiro meel kasta中发布了iyo warbaahinta bulshada sida ay u gaaban tahay oo sahlan tahay的信息。 Waxaad ku dhejin kartaa boostadaada, "Waxan soo iibsaday alaabtan si dib-u-eegis ah，laakiin fikradaha oo dhan ayaa aniga ii ah," alaabooyinka aad heshay lacag la’an.
Xusuuso inaad sheegto haddii aad heshay badeeco bilaash ah，xitaa haddii aad kaligaa wakhti kale ku ruxayso。 Waa Wax Jahwareer ah，laakiin talada ugu wanaagsan ee aan waligey maqlo waa, "Marka Aad Shaki Qabtid，Shaaca Ka Qaado."
Ugu Dambeyntii，有Iyo Jeer Doorta "玛雅阿迪贡" ku xirneyn xidhiidhadaada，xiriiriyahaaga ama蜡羽衣甘蓝。 Haddii uu calaamadku diiday inuu aqbalo tilmaan-bixintaas，ka标签.
Tani waa qayb ka mid ah liiska waxa aad u baahan tahay inaad sameyso ka hortagaan博客-kaaga inuu dacwad soo oogo.
Alaabada aad horey u laheyd oo aadan helin wax magdhow ah，waad ka boodi kartaa tan-ilaa aad jeclaan laheyd inaad shaaca ka qaaddo inaadan helin wax bedel ah boostada.
Tusaale ah kafaalo-qaadasho oo ku xusan horey iyo u dhawaansho alaabada。 Waxaa ku jira "＃广告" ee cinwaanka kor u qaadista warbaahinta bulshada.
1. Badeecadaha istiraatiijiga啊
Waa wax la aqbali karo si ay u noqoto mid si aad u eegto waxyaabaha aad jeceshahay。 Hooska ganacsiga，waxay u badan tahay in aad dhalisid waxyaabo dib u eegis ah.
Waxaa laga yaabaa在laguu soo bandhigo kuuboonada halkii alaabtu bilaabi lahayd中。 Meelahaaga ku soo dhawow sababta ay dhagaystayaashu u habboon yihiin，sida ay uga颚aabi doonaan badeecada iyo waxa aad u qaban doonto。 Waxaad iska dhigtaa inaad ku qoreyso daboolid codsi shaqo!
2. Shirkadaha saamileyda啊
Suuqgeynta saamileyda ah wawa warshad horumarineed oo waxay noqotey il muhiim ah oo ah dakhliga internetka loogu talagalay hooyooyinka badan（oo ay ka mid yihiin kuwa kale）博客作者。 Badeecada shirkadda waxay kor u qaadaa alaabta ama adeegga la raaci karo iyada oo la adeegsanayo xirmooyinka，nanbarada，lambarrada taleefoonka，iwm，taas oo adiga kuu gaar ah。 Kadibna waxaad kasbataa qayb ka mid ah dakhliga marka uu iibku dhaco iyada oo loo marayo xiriirkaaga gaarka ah.
Shabakad xiriiriye ah ayaa badanaa ah mashruuc dhexdhexaad ah oo u dhaxeeya shirkad iyo shirkado ganacsi。 Waa qayb ka mid ah isla’egta suuq-geynta shirkadda oo u egtahay in ay ka baxdo，maadaama shirkadaha badankood wax ka qabtaan badeecooyinka / adeegyada tooska ah，laakiin wali waa xog muhiim ah oo lagu oga.
Guud ahaan，shabakad xiriiriye ah ayaa inta badan waxaa isticmaala ganacsatada si ay maareeyaan barnaamijkooda xiriirka iyo sidoo kale waxay u dhaqmaan sida xogta alaabtooda。 Daabacayaashu waxay markaa dooran karaan alaabada ay doonayaan inay kor u qaadaan，iyagoo ku xiran suuqooda.
Xubinta Guddiga iyo La qaybso iibka waa laba ka mid ah shabakadaha xiriirka ugu caansan.
Waxyaabaha cusub，waxyaan ku talin lahaa Tomoson，kaas oo leh ololeyaal badan oo loogu talagalay baranbarayaasha leh dhagaystayaal yaryar。 Shaqsi ahaan，wassaan bilaabay inaan la soo baxo BlogPRWire iyo SheSpeaks。 Waxaad sidoo羽衣甘蓝isku dayi kartaa MomSelect，Hooyo iyo Bloggy妈妈们.
Marka aad bilowdo inaad dhisato dhagaystayaal，wastaad u-qori kartaa meelaha u baahan in la eego boggooda sare，sida MomCentral，Girls Clever ama Dharka Bulshada.
Tani Waa Halka Xiriirka Blogger Iyo Kooxaha taageerada ay doonayaan inay yimaadaan.
Gugaantan ayaan ka qayb qaatay Waqtiga Ciyaarta majaladda Dhacdada alaabada博客ee Magaalada纽约，halkaas oo shirkaduhu ku soo bandhigaan waxyaabo cusub oo lagu sii daayo iyo demos markay uruurinayaan kaarar。 Dhacdooyinka noocan ah caadiyan waa casuumad keliya，waana sababtaas ay lacag ugu bixiso inay iska diiwaangeliso kooxda blogger-ka maxalliga ah，oo la mid ah taaga。 Phila Social Media Moms iyo Green Sisterhood。Laba kooxood oo aan ka tirsanahay waxaa ka mid ah Waxaan wadaagnaa munaasabadaha，dallacsiinta，fursadaha，talobixinta xirfadda leh waxaanan sare u qaadnaa midba midka kale boggiisa.
Hoos-hormarin，Ka-sii-deyn iyo Is-Badbaadinta Naftaada
Marka ay tikidhada kuu qabato，raac tilmaamaha codsiga dib u eegista.
Haddii和codsadaan蜡aan macquul ahayn，diidi inta aadan bilaabin。 Sumcad leh，sumadaha博主，精明的糯米kuu soo diri doonaan xiriiriyeyaal boggooda halkii y ka istmaali lahaayeen xiriirada qoraalka ee垃圾邮件。 Ballan Qaad Aasaaska-Tusaale Ahaan，Erayga’500 word post’，瓦达阿吉达 & Twitter-ka dibna gaarsiiya waxyaabo dheeri ah，sida wadaagid dheeri ah ama pinning。如果有伊约·杰拉·卡拉梅·苏达达·马尔卡德·科布奇奈索·法卢卢因卡卡.
Ugu dambeyntii，raadi qiimaha doolarka ee和dhammaan badeecooyinka iyo lacag-celinta aad hesho。 Waxaad u baahan doontaa inaad soo sheegto taasoo ah dakhliga canshuurtaada.
Dadka Wax Qora Qora Ma Laagbaa?
Tani waxay kuxirantahay maadaama和jiraan tiro badan oo bogag Internet啊oo aan dhamaantood dakhli abuurin。 Furaha meheradda ayaa ah taraafikada，iyo goobaha taraafikada ee hooseeya inta badan ma awoodaan inay lacag helaan。 Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha waxqabadka ah wado waddo badan oo Blog ah.
Sida qaanuunka suulka，dakhligu wuxuu ku xiran yahay sharciga beddelashada，taasoo la micno ah inay jirto inta badan boqolkiiba qiyaasta taraafikadaada oo soo iibsan doonta badeecad。 Lacagta aad kasbato isbedel kasta waxay kuxirantahay badeecada（yada）aad dalacsiiso.
Tusaale：赫尔卡（Heerka）Beddelka 2.5％iyo kasbashada $ 100 Beddelid kasta，waxaad $ 2,500 ka samayn doontaa 1,000-kii taraafik.
Bloggers-ku waxay marin u heli karaan kanaal fara badan oo loogu talagalay xayeysiinta博客。 Mid ka mid ah qaababka ugu caansan waa iyada oo loo maro warbaahinta bulshada，halkaas oo waxyaabo aad u tiro badan ay ka faa’iidi karaan wadaagista bulshada。 Bilow ahaan，waad u tixraaci kartaa tan 5 istiraatiijiyad aasaasi ah oo lagu kobcinayo akhriska bartaada.
Ayaa ku kasbaday Dheeraad ah-Blogger ama Youtuber?
Youtube badiyaa waxay ka shaqaysaa nidaamka xayeysiinta kaas oo ka codsada dadka istmaala inay yeeshaan aragtiyo badan si ay ganacsi ahaan ugu noqon karaan。 Bogagga蜡ka qora ee ka shaqeeya nidaamka iskaashatada waxay拉哈恩karaan karti ay ku kasbadaan蜡badan oo ka hooseeya qaddarka ho ee ee taraafikada.
Haddii aad raadineyso habab kale oo aad ku kasbato wax Badan oo internetka ah，waan helnay 50 fikradaha ganacsi ee khadka tooska ah waad raaci kartaa.
Ballan qaad iyo adkeysi waa ereyada furaha maalinta bilowga啊。 Waqti Ayey Qaadataa在Laga abuuro taraafikada websaydhada inta lagu gudajiro xilliyada hore，baloogyo badan ma soo saaraan dakhli badan中。 Dhisidda xasillooni xoog leh oo ka kooban waxa ay gacan ka geysan doontaa kordhinta taraafikadaaga waqti ka dib-waana xilligaas in lacagtu ay bilaaban doonto inay qulqulato.
Waxaan si xoogan kuugula talinayaa inaad akhridaan hage faahfaahsan si loo bilaabo baloog halkaas oo aan ka wada hadalnay蜡kasta min A ilaa Z.
Hadda，Waa waqtigii aad ku boodi lahayd oo和bilaabi lahayd。 Ku celceli waxyaalaha aad jeceshahay oo u isticmaal warbaahinta bulshada si aad u dardar geliso qoraaladaada，magoowday的adoo ku dheji sumadda aad。 Kaliya ha istaagin hal ama laba qoraal-adkaysigu waa fure。 Hagaajinta boogahaaga，Haddii aad cusub tahay-la wadaag boggaaga saaxiibada iyo xubnaha qoyska si aad u bilowdaan，bartaan oo hirgeliyaan SEO wanaagsan，oo sii daabac waxyaabaha wanaagsan.
Waxaad samayn kartaa棕褐色。杰里·洛（Jerry Low），哦，我是博奇（wuxuu bilaabay）WHSR，还是凯莉亚·博格（di ke eegista martida）。 Bal Fiiri sida uu isaga iyo kooxdiisa ay maanta u yimaadeen-WebHostingSecretRevealed.net（WHSR）wuxuu noqday mid ka mid ah goobaha ugu fiican ee martigelinta ee halkaas ka jira.
Hagaha A-to-Z ee Qalabka Lacageedka Saaraajka（SSL）ee Ganacsiga在线
40 Tebûrkirina Navneteweyî Ya Xweseriya Xweser Bikin
Blogunuzun oxunuşunu fəth etmək üçün 7 hekayə metodu
15 Talooyin Muhiim ah oo Lagu Hagaajiyo و Dhiirrigelinta & Helitaanka Gaaddi Dheeri ah oo Bloggaaga Maanta ah
Tutorial de WordPress: Com crear un complement de testimonis
Ku darista Luqadaha Kala duwan i WordPress